Ubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu lwengcambu blower, China Ubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu lweeComputer Blower abavelisi, abaXhasi, abaFektri - NANTONG RONGHENG
Ikhaya>iimveliso>Iingcambu Blower / Vacuum Pump>Ubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu lweengcambu blower
Uthotho lwe-HT lobushushu obuphezulu kunye nefeni yoxinzelelo oluphezulu yimveliso eyilelwe ngokukodwa imeko yokusebenza njenge fan ejikelezayo kwinkqubo evaliweyo.
Ukugcina ukusebenza ngokukuko okuphezulu kwezi nkqubo, zihlala zinamaqondo aphezulu obushushu kunye noxinzelelo kwinkqubo. Kuba ezona zinto ziphambili ze-Roots blower zihlala zenziwe nge-iron cast, izinto zinokufakwa okanye zenziwe igrafikhi kubushushu obuphezulu, kwaye kukho ingozi efihliweyo yokuqhushumba komzimba phantsi koxinzelelo oluphezulu. Izitywina zerabha ngokubanzi zihlala ziguga kwaye zisilele kumaqondo obushushu aphezulu. Kwangelo xesha, iibheringi phantsi kweqondo lobushushu eliphezulu zithambekele ekuthini zisilele ngenxa yenguqu yesakhiwo se-metallographic yezinto. Ezi meko zibeka phambili uthotho lweBango elikhohlakeleyo.
I-HT Roots blower enikezelwe kubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu yenziwe ngokukodwa kwaye yaphuculwa kwezi meko zingasentla. Kucetywe ngobunono uhlobo oluvulekileyo, amanzi apholileyo ahlanganisiweyo aqukethe isakhiwo sezindlu. Umzimba ovulekileyo usetyenziselwa ukukhulula uxinzelelo oluphezulu ngelixa kuthintelwa ukuhanjiswa kobushushu obuphezulu ekuthwalweni, kunye nomngcipheko we-flashover obangelwa kukuvuza kwesithambisi kwibhokisi yegiya emzimbeni uyasuswa. Ubukho bolwakhiwo lwamanzi apholileyo longeza i-inshurensi ephindwe kabini kukhuseleko lokuthwala, okuphucula ngokufanelekileyo ukuzinza komzimba, ukwandisa ubomi, kunye nokunciphisa iqondo lobushushu kuwo wonke umatshini.
Kwangelo xesha, i-HT ephezulu-yeqondo lobushushu kunye noxinzelelo oluphezulu abalandeli, inani elikhulu lamatywina oomatshini kunye namatywina e-PTFE asetyenziselwa ukunqanda ngokufanelekileyo iziphene zamalungu erabha aqhelekileyo asilelayo kumaqondo obushushu aphezulu.
Oku kulandelayo yinkqubo emiselweyo yomzobo kunye nomgangatho ofezekisekayo womgangatho wobushushu obuphezulu be-HT kunye nefeni yoxinzelelo oluphezulu lweemeko ezikhethekileyo zokusebenza.
● Indlela yokuhambisa: uqhagamshelo ngqo;
● Ukupholisa: Isakhiwo sokupholisa amanzi ngokubanzi, isixhobo esikhethekileyo sokujikeleza sokupholisa amanzi, ukujikeleza isixhobo sokupholisa ioyile sinokukhetha;
Isantya esisebenzayo: 490/580/730/980 / 1450RPM;
Uxinzelelo oluphezulu: 1.2MPa;
Ukupholisa ubushushu bokutshintsha kokupholisa: 90 ℃;
Qaphela: Ubushushu obuphezulu kunye neemeko zoxinzelelo oluphezulu zinzima, kwaye ukhetho kunzima. Nceda unxibelelane nenkampani yethu kwangaphambili kunxibelelwano.